Isenzo esenzelwe 'amasha' amashadi asebenzisa amakhandlela kaHeikin Ashi, ukuthi kulula kanjani ukushaya ucingo oluyinkimbinkimbi | Ibhulogi ye-FXCC
Dec 19 • Phakathi kwemigqa • Ukubuka kwe-10950 • 1 Comment Ngezinyathelo zezintengo 'zezinkanyezi' amashadi esebenzisa amakhandlela kaHeikin Ashi, ukuthi kulula kanjani ukushaya ucingo oluyinkimbinkimbi
Ayikho impikiswano yokuthi ukuhweba okusekelwe ekukhanyiseni empeleni 'kusebenza', naphezu kwamazinga okuhlaziya abahwebi abanolwazi nabaphumelelayo, ukuhweba okusekelwe ekuboniseni kuye kwaba ukuhlolwa kwesikhathi. Ukuhweba okusekelwe ekusebenzeni kusebenza ngokukhethekile eshadini nsuku zonke, okuyisikhathi esenziwa abadali bezinkomba ezihlukahlukene okwakhiwa izinkomba zokusebenza.
Uma abadayisi befunda ama-athikili aqukethe imibono evela ekuhlaleni abahlaziyizikhungo ezikhungweni ezinkulu bayakuqaphela ngokushesha ukuthi, phezulu kakhulu kweketheni lethu lokudla, izinkomba zisetshenziswa ngokuphumelelayo. Izihloko ngezikhathi ezithile zizobhekisela kubahlaziyili ku-JP Morgan noma kuMorgan Stanley nokusetshenziswa kwazo kwezinkomba ezithile.
Izihloko ku-Bloomberg noma ku-Reuters, zivame ukucaphuna ukusetshenziswa kwezinkomba ezingaphezu kwezinguquko noma ezithintekayo ezifana ne-RSI nama-stochastics, noma izingcaphuno ze-Bollinger ne-ADX. Abathengisi abaningi abaphezulu kakhulu emsebenzini wabo ezikhungweni basebenzise izinkomba ezilodwa noma eziningi ukusekela izinqumo zabo. Izihloko ezifanayo zivame ukukhomba imibono mayelana nezinombolo ezizungezile ezihambayo nezindawo ezihambayo ezilula ezifana ne-200 SMA. Kodwa-ke, naphezu kokusebenza kwezinkomba kukhona ukugxeka okunzima ukuphikisana -ukuthi lezo zikhombisi-ndlela zikhona.
Naphezu kwemibono ephikisanayo akukho zikhombisi eziholayo, zonke izinkomba esizijwayele ngempela. Azikho izinkomba ezingakwazi ukubikezela ukunyakaza kwentengo. Izinkomba eziningi zingasikisela ukushintsha amaphuzu, noma ukukhathala kokunyakaza okusheshayo, kodwa akekho ongakwazi ukubikezela ukuthi intengo ihamba kuphi. Izindlela zokuhweba ezisuselwe ekukhonjisweni kanye namasu ajwayelekile kukhona izindlela ezinhle kakhulu zokulandela intengo.
Ukuntuleka kwekhwalithi yokubikezela yilokho okubangela abahwebi abaningi ukuba balahle amasu asekelwe ku-indicator ukuze benze isenzo senani. Inkokhelo yentengo yikho, ekukholweni kwabadayisi abaningi abanolwazi futhi abaphumelelayo, indlela yokuhweba kuphela ekwazi ukumelela imizwa yezitshalomali futhi ngaleyo ndlela inakho ukuhola ngokuphambene nokuguga eshadini, ikakhulukazi isikhathi sosuku.
Isenzo senani livame ukudidisa abathengisi abasha
Naphezu kokulula kwezenzo zamanani kuyisiqalo sokuhweba ukuthi abadayisi abasha kubonakala sengathi badinga ukuzama izindlela zokuhweba ezisekelwe ekuboneni ngaphambi kokuthola nokuhlola lokho esikubiza ngokuthi "isenzo senani". Esinye sezizathu zokuthi abathengisi abaningi abasha badidekile nomqondo wokuphakama okuphakeme noma ukwehla okuphansi nokuphakama okuphansi, ukwehla okuphezulu.
Kulesi sigaba kungenzeka ukuthi kuhlakaniphile ukunikeza incazelo yesenzo senani okuyinto iningi labathengisi nabahlaziyi bevumelana ...
Iyini isenzo senani?
Isenzo senani luhlobo lokuhlaziywa kobuchwepheshe. Yini ehlukanisa ngayo nezinhlobo eziningi zokuhlaziywa kwezobuchwepheshe ukuthi ukugxila okuyinhloko ukuhlobana kwentengo yezokuphepha yamanani ayo adlule ngokuphambene namanani aphuma kulowo mlando wamanani. Lo mlando odlule uhlanganisa ukuguqula phezulu nokuguqula ukuhamba, imigqa yokuthambekela, namazinga wokusekela nokumelana. Emizamweni yayo elula kakhulu yokulinganisa intengo yokuchaza izinqubo zomcabango zabantu ezifunwa ngabathengisi abanolwazi, abangaqondisi izigwegwe njengoba bebheka futhi bethengisa izimakethe zabo. Isenzo senani nje ukuthi amanani ashintsha kanjani - isenzo samanani. Kuthathwa kalula ezimakethe lapho uketshezi nokwehluleka kwentengo kuphezulu.
Abathengisi baqaphela ubungako obuhlobo, ukuma, isikhundla, ukukhula (lapho bebukela inani langempela lesikhathi-nesikhathi) kanye nevolumu (optionally) yemishayo ku-bar ye-OHLC noma ishadi lamakhandlela, eqala njengokulula njengebha elilodwa, okuvame ukuhlanganiswa neshadi amafomu atholakala ekuhlaziyeni okubanzi kwezobuchwepheshe njengokuhamba kwesilinganiso, imigqa yokuthambekela noma amabanga okuhweba. Ukusetshenziswa kokuhlaziywa kwamanani entengo yokucabangela kwezezimali akukhiyi ukusetshenziselwa kwamanye amasu okuhlaziywa ngesikhathi esifanayo, futhi ngakolunye uhlangothi, umdayisi wesenzo esincane kakhulu angathembela ngokugcwele ekuchazeni kokuziphatha kwentengo yokwakha isu lokuhweba.
Isenzo senani usebenzisa amakhandlela kaHeikin Ashi kuphela
Naphezu kokulula okulula kukhona indlela yokuthengiswa kwamanani entengo elula ukwenza le nqubo ngokuqhubekayo - ngokusebenzisa amakhandlela kaHeikin Ashi ngaphandle kwemigqa yendabuko, amazinga e-pivot noma ukusebenzisa izinyathelo ezihamba phambili ezinjenge-300 SMA.
Amakhandlela ase-Heikin-Ashi ayimfucumfucu evela emakhandeni aseJapane. Amakhandlela ase-Heikin-Ashi asebenzisa idatha evuliwe-kusukela esikhathini esingaphambili kanye nedatha evulekile-ephansi-yokuvala kusukela esikhathini samanje ukudala isibani samakhandlela. Ikhandlela elikhanyayo lihlunga umsindo othile ngomzamo wokubamba kangcono umkhuba. EJapane, uHeikin usho ukuthi "isilinganiso" nelithi "ashi" lisho "ijubane". Ukuhlanganiswa ndawonye, ​​u-Heikin-Ashi umelela isilinganiso esivamile samanani. Amakhandlela kaHeikin-Ashi awasetshenziswanga njengamakhandlela avamile. Amathrekhi amaningi we-bullish noma ama-bearish aguquguqukayo ahlanganisa izibani ze-1-3 azitholakali. Esikhundleni salokhu, lezi zibani zingasetshenziswa ukukhomba izikhathi ezihamba phambili, amaphuzu angaguquguqukayo kanye namaphethini wokuhlaziya lobuchwepheshe obudala.
Ukulula kwamakhandlela kaHeikin Ashi
Ukuhweba ngekhandlela likaHeikin Ashi kunciphisa umqondo jikelele njengoba kuncane kakhulu ukubuka, ukuhlaziya nokwenza izinqumo. 'Ukufundwa' kwamakhandlela, ngokuziphatha kwentengo, kulula, ikakhulukazi uma uqhathanisa nokusebenzisa amaphethini wamakhandlela avamile okudinga amakhono amaningi nokuzikhandla ukuchofoza.
Isibonelo, noHeikin Ashi kukhona amaphethini amakhandlela amabili kuphela etafuleni lansuku zonke elingase libonise ukuphenduka (ukuguqula ukuzwa); i-top spinning kanye ne-doji. Ngokufanayo uma abathengisi basebenzisa izikhala ezingenalutho noma ezigcwele izibani emakhadi abo ikhandlela eligcwele eligcwele noma ibha limelela izimo ze-bearish, kanti isibani esingenalutho esingenalutho sibonisa ukuzwa kwe-bullish.
Ngemuva kwaloko kuphela okunye okudingekayo ukulinganisa ukulinganisa ukuma kwangempela kwekhandlela. Umzimba ovaliwe omude onethunzi elibalulekile ulingana nesimo esiqinile, ikakhulukazi uma lelo phethini liphindaphindiwe phezu kwamakhandlela ezinsuku ezimbalwa. Ukuqhathanisa nokuqhathanisa lokhu ngokuzama ukucacisa imizwa ngokusebenzisa amakhandlela avamile ukubolekisa izinhlamvu kulo mqondo wokuthi ukuhweba usebenzisa amakhandlela e-HA kulula kakhulu, kodwa akulahlekelwa yinto efunwa ngumthengisi wesilinganiso somthengi.
Abathengisi abasha nabasha abasolwa nabo uHeikin Ashi banikeza ithuba elihle lokuthola izinzuzo zokuhweba ezivela eshadini elihlanzekile nelingahlanganisiwe. Inikeza isixazululo esiphelele 'sendlu enqamule' phakathi kokuhweba okusekelwe kukhombisa futhi usebenzisa amakhandlela endabuko. Abathengisi abaningi empeleni bazama ukuzama ukuhlola uHeikin Ashi futhi bahlale nalo banikeze lula nokusebenza kwayo njengoba ukucaca nokusebenza kahle kuboniswa kumashadi wansuku zonke kunika ezinye zezindlela zokuhumusha ezingcono kakhulu ezikhona.
« I-Federal Reserve ithatha imali yokuvuselela imali ngokusekelwe kwemisebenzi eqinile ukukhula ngenkathi idola lifinyelela eminyakeni emihlanu ephezulu ne-yen Izimakethe zaseYurophu zibhekene ne-FOMC ne-rally ekuhwebeni kwasekuqaleni, njengoba izisebenzi ze-EU zihamba ngobusuku obuningi zivumelanisa isivumelwano sebhange »